Tatitra Pantone: Alokaloka / Ririnina 2015/2016 Aloka | Famoronana an-tserasera
Tatitra Pantone: Aloky ny fararano / ririnina 2015/2016
Fran Marin | | Graphic Design, Palety miloko
Pantone dia namoaka ny tatitra chromatic ary ny loko mahomby indrindra amin'ity vanim-potoana ity araka ny komitin'ny mpamolavola sy ny matihanina amin'ny tontolon'ny sary. Ity fararano ity (na ny tena ririnina), dia hampiavaka azy amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba hafa sy alokaloka izay manasongadina ireo nuansa voajanahary, vehivavy ary lalina indrindra.
Amin'ity safidy vaovao ity dia maro ny fanomezam-boninahitra natao ho an'ireo zava-nitranga manan-tantara tany Etazonia toy ny taona 20 mahery, ny vanim-potoana hippie milamina ary ny am-polony taona bohemia tamin'ny faha-enimpolo sy fitopololahy, feno ireo vahaolana malemy kokoa izay mampita filaminana sy fy. Izy io dia palety izay tsy manana orientation voafaritra momba ny inona izany unisex (Ny vahaolana rehetra dia atolotra ho an'ny lahy sy ny vavy).
Feo tsy miandany izay eo anelanelan'ny maintso sy fotsy. Tena fararano izy io ary mety tsara amin'ny fandrakofana faritra midadasika satria tsy dia be loatra izy io ary mandeha mora foana. Manondro ny natiora amin'ny fomba tena mivantana izy io satria izy io dia maneho amin'ny fomba tena azo antoka amin'ny fotokevitra miorina amin'ny fotony. Mandritra izany fotoana izany dia mahery vaika izy io ary miasa tena tsara nefa tsy mila ampahatanjahan'ny tonony hafa. Stormy Weather, Oak Buff ary Dried Herb dia mifangaro tsara amin'ity safidy ity ary ho an'ny tononkira hafa Retro dia miaraka amina Cadmium Orange sy Cashmere Rose no ampiasaina matetika.
Toetran'ny oram-baratra # 58646D
Volondavenona manga mamirapiratra izay mamirapiratra sy mitahiry fahatsiarovana voajanahary sasany satria tena mitovy amin'ny lokon'ny lanitra feno rahona. Manome fiadanan-tsaina izy io ary azo ampiasaina hanehoana ny foto-kevitra toy ny kalitao na rendrarendra. Tena marobe izy io ary azo ampifangaroina amina safidy marobe ao anaty paleta.
Oak Buff # D09D5
Dikanteny iray an'ny fianakaviana mavo izay mafana sy mampatsiahy ny masoandro vao mangiran-dratsy. Izy io dia manana toetra mampihetsi-po be dia be ary azo ampifangaroina amin'ny fomba mirindra miaraka amin'ny Desert Sage na Stormy Weather, indrindra raha te-hamorona fitambarana chromatic ianao izay mitarika ny fararano.
Herb maina # 847F5D
Manome ny fahamendrehana sy ny nuances ny sophistication. Maitso oliva izy io ary koa misy nuansa voajanahary sasany. Safidy voajanahary tokoa izy io ary ambonin'izay rehetra safidy voajanahary izay azo ampiasaina amin'ny faritra midadasika ary mety ho vahaolana mety indrindra raha te hanana fifanoherana mifanaraka isika. Afaka manao fitambarana mahaliana ianao miaraka amin'ireo safidy toa an'i Marsala, Stormy Weathe na Biscay Bay.
Io no fahombiazana indrindra amin'ny taona 2015. Safidy mafana sy akaiky amin'ny zavatra rehetra izy io. Volontany izay mazàna mena ary afaka be mpampiasa koa mba hamoronana fitambarana fararano. Izy io dia mitambatra tsara amin'ny fomba hafa toy ny Black & White ary ireo faritra manga izay hita ao amin'ireo tolo-kevitry ny lohataona-fahavaratra 2015 sy ny fararano-ririnina 2015-2016. Izy io koa dia azo ampiarahina tsara amin'ny loko mainty na manga toy ny Reflecting Pond. Tsy misy isalasalana, safidy tena tsara noho ny singa mafana sy sariaka.
Izy io dia teboka afovoany manelanelana maitso sy manga izay manome mihoatra ny fitoniana sy ny fahasalamana. Feo amboninny vaovao sy tsy mavesatra akory izy io. Tropikaly ihany koa izy io ary anisan'ireo fitambarany dia afaka misafidy izay loko rehetra avy amin'ny paleta misy antsika isika.
Cadmium Orange # F5926C
Izy io dia vahaolana volomboasary izay ao anatin'ny palette misy antsika dia manao karazana nodohan-taolana ho an'ireo enimpolo taona. Ny fanantenana, ny fahaiza-mamorona ary ny fahafinaretana dia voarakitra ao amin'ity safidy ity nefa tsy mahafoy ny hakantony. Mahafinaritra sy akaiky izy io nefa tsy mahery setra ka azo ampiasaina irery na dia azo ampiasaina amin'ny fomba hafa isan-karazany aza mba hanolorana fifanoherana mahaliana. Ohatra amin'ny loko Cashmere Rose.
Safidy mavokely tena malefaka izay mampipoitra ny endrika Retro be indrindra ary miaraka amin'izay ny fironana ankehitriny. Izy io dia velona, ​​mandresy lahatra ary mazàna. Mahery vaika izy io ka azo ampiasaina irery, na dia azo atao ihany aza ny valiny mahaliana rehefa atambatra amin'ny Cadmium Orange, Desert Sage na Marsala.
Trano fitaratra taratra # 32334
Manga mangatsiaka sy matevina izy io izay manome ny halalin'ity safidy ririnina ity. Manome filaminana, fitoniana ary hatsiaka. Izy io dia azo atambatra tsara amin'ny mainty na amin'ny alokaloka toa an'i Marsala, Stormy Weather na Amethyst Orchid (ity farany ity dia mety amin'ny vahaolana angano kokoa).
Amethyst Orchid Hex #: 9164AB
Satria loko iray izay tsy dia misy loatra eo amin'ny natiora, ny loko volomparasy dia misy fiantraikany lalina amin'ny mistika sy ara-panahy. Mistery, vehivavy ary akaiky izany. Azo ampiasaina irery irery izy io, na dia torohevitra ihany koa aza ny afangaro amin'ny singa mainty na loko toy ny Reflecting Pong sy Marsala. Raha ny zavatra tadiavintsika dia vokany Retro dia azontsika atao ihany koa ny mampifangaro azy amin'ny loko volomboasary sy mavokely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Tatitra Pantone: Aloky ny fararano / ririnina 2015/2016
Endritsoratra 15 tonga lafatra ho an'ny Krismasy